Baldia Online Apk Download ho an'ny Android [2022 Update] | APKOLL
Baldia Online no fampiharana Android farany, izay novolavolain'ny governemanta Pakistan. Manolotra fisoratana anarana amin'ny Internet ho an'ny fanamarinana ny Fahaterahana, fanamarinana ny fanambadiana, fanamarinana ny fahafatesana, ary fanamarinana ny fisaraham-panambadiana.
Araka ny fantatrao, asa tena sarotra ny manao izany ary tsy maintsy mandalo dingana samihafa amin'ny governemanta ny olona mba hahazoana ny mari-pankasitrahana. Noho ny hamaroan'ny olona eto amin'ny firenena dia sarotra ho an'ny mpiasam-panjakana ny manome serivisy haingana. Noho izany, ny governemanta dia mampiditra ity rafitra ity.
Io no fomba tsara indrindra ahazoana eo am-baravaranao ireo zavatra rehetra tadiavinao. Misy endri-javatra maro kokoa an'ity fampiharana ity, izay hozarainay aminareo rehetra. Noho izany, tokony hijanona miaraka aminay vetivety ianao hahafantarana momba ity app ity, alohan'ny hampiasana azy.
Topimaso momba an'i Baldia Online
Izy io dia rindranasa Android, izay novolavolain'ny Board of ITABABAB. Namboarina manokana izy io ho an'ny mponin'i Punjab, mba hisoratra anarana momba ny fiainam-pianakaviany. Manome anao ny fahaizana mangataka karazana rafitra fanamarinana avy amin'ny governemanta izany.
Baldiaonline dia novolavolaina tamin'ny fiteny maro, izay fahita indrindra any Pakistan. Ny voalohany dia ny tenim-pirenena Urdu ary ny iray amin'ny teny anglisy. Noho izany, mora be kokoa ny mampiasa azy. Ny Pakistanis irery no afaka miditra aminy.
Mba hidirana amin'ny endri-javatra amin'ity fampiharana ity dia mila mandalo dingana fisoratana anarana ianao. Ny voalohany tsy maintsy ampidirinao dia ny laharana finday sy ny anaran'ny tambajotra. Tsy maintsy miditra amin'ny tambajotra ampiasainao sy ny laharana finday ihany koa ianao.
Izy io dia hanome anao hidirana amin'ireo endri-javatra sasany azonao ampiharina amin'ny hafa. Azonao atao mihitsy aza ny mandefa soso-kevitra momba ny tetikasa fampandrosoana bebe kokoa ary azonao atao koa ny mametraka fitarainana momba ny olan'ny governemanta. Olona manan-talenta no manara-maso azy rehetra ireo ary hanome ny vahaolana tsara indrindra.
Mba hametrahana fitarainana dia tsy maintsy mameno taratasy ihany koa ianao. Misy fampahalalana mila ampidirinao mba hametrahana fitarainana. Ny voalohany dia ny Divizionao. Tsy maintsy miditra amin'ny Diviziona misy anao ianao, avy eo - Distrika, Tehsil. Aorian'izay dia tsy maintsy manome ny anaran'ny governemanta eo an-toerana ianao.
Azonao atao koa ny mampiditra antontan-taratasy sy rakitra hafa miaraka amin'ny fitarainanao. Ny tompon'andraikitra dia hifandray aminao haingana araka izay azo atao. Misy endri-javatra samihafa azonao idirana amin'ny alàlan'ity fampiharana ity. Ny governemanta dia manome iray amin'ireo fomba tsara indrindra ho an'ny olom-pirenena amin'ny fanovana kalitao.
Noho izany, misintona Baldiaonline Apk fotsiny ary afaka mamita ny asa rehetra tsotra ianao. Raha manana olana amin'ny fampidinana ity fampiharana ity ianao dia aza misalasala mifandray aminay, amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Anaran'ny fonosana com.pk.gov.baldia.online
Developer Board IT IT
Endri-javatra manan-danja amin'ny Baldia Online App
Misy endri-javatra an-taonina amin'ity fampiharana ity, izay afaka miditra amin'ny olom-pirenena Pakistan rehetra. Izahay dia hizara ny sasany amin'ireo tena mampiavaka an'ity fampiharana ity aminao rehetra ao amin'ny lisitra eto ambany.
Mora mifandray amin'ny tompon'andraikitra
Valiny haingana avy amin'ny tompon'andraikitra
Ahoana ny fampidinana Baldia Online Apk?
Azo alaina ao amin'ny Google Play Store izy io ary manolotra rohy miasa azo antoka sy miasa amin'ity app ity izahay. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay hita eo ambony sy ambany eto amin'ity pejy ity. Tsindrio ny bokotra fampidinana ary miandry segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
Raha vantany vao vita ny fisintomana dia tsy maintsy manisy fanovana ianao, alohan'ny fizotry ny fametrahana. Mba hanaovana izany, mandehana any amin'ny Settings ary sokafy ny fisintomana, ary avy eo alefaso ny 'Source tsy fantatra'. Azonao atao izao ny mametraka azy amin'ny fitaovanao Android.
Baldia Online no rindrambaiko tsara indrindra, izay manampy olona maro ao Pakistan hahazo ny fanamarinana fototra rehetra tsy misy olana. Noho izany, sintomy ity rindrambaiko ity ary mahazo fidirana amin'ireo endri-javatra. Raha manana olana ianao amin'ny fampidinana ity app ity dia aza misalasala mifandray aminay.
Sokajy Apps, famokarana Tags Baldia Online, Baldia Online Apk, App Online Baldia Post Fikarohana
Insta Orange Apk Download ho an'ny Android [2022 Insta Tool]